Ho Anà Somaliàna Iray Mizaka Zom-pirenena Anglisy, “TebokaTsy Azo Iverenana” Ny Brexit · Global Voices teny Malagasy
“The hatred against those of us who oppose Brexit has become unbearable”
Voadika ny 23 Avrily 2017 13:16 GMT
Londra, 3 Martsa 2017 StoptheSilence Brexit Hate Crimes (AtsaharoNyFahanginana manoloana ny Heloka bevava ateraky ny fankahalàna ).. SARY: David Holt (CC BY 2.0)
“Nanova ny zavatra rehetra ny Brexit ary tsy mbola fantatray hatramin'ny rahoviana no hitohizan'izany fiovàna izany” hoy i Ismael Enashe, Britanika mpanao gazety sady mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'i Kolombia.
Niresaka tamin'i Einashe aho nandritra ny Idea Camp, fandaharanasa iray nampiantranoin'ny Fikambanana Ara-kolotsaina Eoropeana any Madrida tamin'ny voalohandohan'ny volana Martsa. “Tsy nisy nieritreritra izay hitranga manaraka ary tsy mbola nisy fandaminana momba izay mety ho fiantraikan'ity fanapahankevita ity amin'ireo telo tapitrisa [olom-pirenena sy mponina ao Grande Bretagne].”
Iray amin'ireo niharam-boina noho ny politika noraisin'i Grande Bretagne tao anatin'ny taona vitsy i Einashe. Lasa miha henjana sady mampiahiahy ireny politika ireny ho an'ireo ampahanà mponina any Angletera maniry hijanona ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana, izay ahitana ampahany betsaka amin'ny vondrom-piarahamonina Silamo . Fito amin'ny Silamo folo no nifidy manohitra ny Brexit. Ny Praiminisitra Theresa May, aminà hevitra samy hafa, manondro ireo 48% mpifidy manohitra ny Brexit ho “sangany kapitalista, mponina an-tanàndehibe”, “be konetaka” ary “olom-pirenen'izao tontolo izao”. Namaly i Einashe fa ireny fanambaràna ireny dia nanokatra varavarana ho anà tranga sy fanehoankevitra mifandray amin'ny fanavakavahana, mitovy amin'ny fanambarana nataon'i Trump tany Etazonia ary i Le Pen tany Frantsa.
“Noho ny fitondram-panjakana sy ny andrim-panjakana izay miteny tsy misy sivana manohitra ny fivavahana sy ny foko vitsy an'isa, na ny olona manana fironana ara-pananahana hafa, maro amin'ireo olona mpanavakavaka no nivoaka avy any anaty trano fandrafetana any. Misy aza mpitsara nahazo fandrahonana noho ny fanaovany ny asany. Tsy ilay Angletera izay nahalehibe ahy ity, ilay niriako fatratra hambara ho misy ahy, ” hoy koa i Einashe, nampifandray ny fitomboan'ny fanehoankevitra manavakavaka amin'ny heloka be vava ateraky ny fankahalàna izay tonga hatrany amin'ny famonoana olona mihitsy.
Tsy mora ny làlana nodiavin'i Einashe hahazoana ny zo maha-olom-pirenena. Tamin'ny 1994, fony izy sivy taona. tonga tany Londra i Einashe niaraka tamin'ny ray aman-dreniny, nandositra ny ady an-trano nandravarava nandritra ny folo taona tany Somalia. Nitombo teo anelanelan'ny fari-piadidian'ny Camden sy Colindale izy, niaraka tamin'ireo Kiorda, Bosniaka ary Kosovara mpitsoa-ponenana tamin'ny lafiny iray, ary mpiasa fotsy hoditra tamin'ny lafiny iray hafa. Tamin'ny fankahalana no nandraisana ny fianakaviana Einashe, hany fianakaviana mainty hoditra teo amin'ny mpiray vodirindrina. “Nisy mpiray vodirindrina izay tonga hatramin'ny fanipazana fako tao amin'ny zaridainanay. Notsimponin'ny reniko mamako fotsiny izany fa tsy niteny izy.”
Tamin'ny 2001, taona nisian'ilay fanafihan'ny 11 Septambra, nahazo ny zom-pirenena Anglisy i Einashe. Tamin'izany fotoana izany izy no nahavita ny sekoly ambaratonga faharoa, ary noho ireo naotiny ambony, voaray tao amin'ny iray amin'ny kolejy tsara indrindra tao amin'ny firenena izy. Nanodidina io fotoana io no nanomboka niova ny toejavatra tao amin'ny firenena.
“Mandra-pahatongan'izay fotoana izay,” hoy Einashe,” antsipirihan-javatra ara-pitantanana fotsiny ny zom-pirenena Britanika. Azonao izany ary dia adinon'ny fanjakana ny momba anao. Taorian'ny 11 septambra, nanomboka nahazo ny fitiliana zom-pirenena izy ireo, fanamafisana ny “soatoavina ifampizaràna” , ireo lanonana izay hanaovanao fianianana tsy hivadika amin'ny fitondram-panjakana sy ny Fanjakana ary ny fiahiahiana ireo olom-pirenena Silamo.”
Nandritra ny andian-taona 2000, Angletera, mitovy amin'i Etazonia, dia nametraka ireo olom-pirenena Silamo teo ambany fanarahamaso, indrindra fa ireo izay teraka tany amin'ny firenena hafa na mizàka zom-pirenena roa, ka mahatonga ny maro hahatsapa ny tenany ho toy ny olom-pirenena kilasy faharoa. Niaina korontana mahatsiravina ny firenana taorian'ny fanapoahana baomba tao Londra tamin'ny 7 Jona 2015, izay nitsikeran'ny Britanika maro ny vondrom-piarahamonina Silamo. Tsy nitsaha-nitombo ny disadisa teo amin'ireo vondrom-piarahamonina. Lasa naharitra ireo fihetsika naseho ho toy ny fepetra vonjimaika, anisan'izay ny fahafahana misintona ny zom-pirenena Britanika tsy ho an'olona iray na dia tsy misy didy navoakan'ny fitsarana aza, fomba fanao izay nitombo hatrany hatramin'ny nisian'ny Brexit.
Tsy nitsahatra nitombo ny fisintonana ny zom-pirenena tamin'ny fitondran'i May, araka ny Biraon'ny Fanaovana gazetim-Panadihadiana. “Saika fanapahankevitra jadona izy ireny izay tokony hampitahotra tanteraka ny olona, na ao anatin'ny firenena na ny any ivelany, nefa tsy nahasarika ny saina na kely aza,” hoy Einashe. Teboka tsy azo iverenana no hitany ao anatin'ny Brexit, fivakisana ao amin'ny fiarahamonina Britanika, eo amin'ireo manohana ny governemanta manohitra ny fijerin'ny Eoropeana sy ireo antsoina hoe “mpanohitra ny fitiavan-tanindrazana” mitovy aminy izay manohitra ny fisintahan'i Angletera tao amin'ny tsena iombonana.
“Tsy mpanohitra ireo tia tanindrazana aho, fa ny mifanohitra amin'izany tanteraka”, hoy izy. “Ny Angleterako dia ilay Angleteran'ny fifangaroan'ny kolontsaina, ilay Angletera misokatra amin'izao tontolo izao, izay tandindonin-doza ankehitriny.”
Ankoatra ny fisintonana ilay zom-pirenena izay sarotra ny nahazoany azy, atahoran'i Einashe ny hamelàn'ny Brexit ireo olom-pirenena an'aliny maro ho amin'ny toerana marefo, amin'izao fotoana izay tsy ananan-dry zareo intsony ny fidirana ao anatin'ny rafitry ny fiarovana atolotry ny rafitra ara-dalànan’ ny Vondrona Eoropeana izao. “Ankehitriny isika dia miankina tanteraka amin'ny politika Britanika ary tsy manana intsony fahefana hafa itodihana.”